Izinto eziyi-10 ongahle ungazazi ngomgibeli wamabhayisikili uTadej Pogačar - ULLER
Izinto eziyi-10 ongahle ungazazi ngomgibeli wamabhayisikili uTadej Pogačar
Julayi 22, i-2021
Uma ungumuntu othanda ukuhamba ngebhayisikili nakho konke okuzungeze lo mdlalo, kungenzeka ukuthi usuvele uyazi umsebenzi wezemidlalo kaTadej Pogačar, umgibeli wamabhayisikili oqeqeshiwe waseSlovenia osenqobe izicoco nemiklomelo eminingi selokhu yaqala. Phakathi kwazo kukhona umncintiswano iVuelta a España lapho anqobe khona ezigabeni ezintathu waqeda endaweni yesithathu.
Ngawo lowo nyaka futhi waba umgibeli omncane kunabo bonke ukubanga indawo yokuqala emjahweni wasesteji eTour of California lapho eneminyaka engu-20. Ngaphezu kwalokho, wawina nezinhlelo ezimbili ezilandelanayo zeTour de France, waba umgibeli wamabhayisikili wesibili omncane ukuwina lo mncintiswano omkhulu ngemuva kukaHenri Cornet.
Kusobala ukuthi ukuzinikela nokuzikhandla kungababili babaholi abaphambili empilweni yomsubathi, ngakho-ke, namuhla sithola izifiso eziyishumi ngomsebenzi wakhe wobungcweti okungenzeka ubungazi ngawo. Hlala ufunde okuthunyelwe kwanamuhla uma unesithakazelo emhlabeni wamabhayisikili njengathi!
1. UTadej Pogačar wazalelwa kuphi futhi nini?
Umgibeli wamabhayisikili wazalwa ngoSepthemba 21, 1998 eKlanc, idolobha elincane eliseduze nomasipala waseKomenda, esifundeni esingenhla saseSlovenia. Kusukela esemncane kakhulu, wayehehwa ngamabhayisikili nakho konke okwakukuzungezile, ngendlela yokuthi eneminyaka eyi-16 nje ubudala wayesevele encintisana ngendlela esezingeni eliphansi yeqembu lamabhayisikili laseSlovenia, abamba iqhaza kulo iTour wezwe lakhe lokuzalwa ukuze azilinganise ngochwepheshe abakhulu bezemidlalo futhi aqale umsebenzi wabo ngendlela ekhanyayo.
2. Ubuwazi ukuthi ngu-Eddy Merckx owakhetha isiteketiso sakhe?
U-Eddy Merckx, inganekwane yangempela yamabhayisikili, nguyena owethiya lo mfana osemncane waseSlovenia igama elithi "odla abantu", okuyisinciphiso sesiteketiso sakhe, "umazimuzimu", ukuhlonipha ezinye zezici bobabili ababelana ngazo. NjengoMerckx, umgibeli wamabhayisikili waseSlovenia uzibonakalise ngaphezu kokuzibonakalisa eyisibonelo samandla nokuzinikela yize esemncane futhi enolwazi oluncane. Bobabili bathole ijezi elimhlophe, elibomvu neliphuzi besebancane kakhulu futhi bakhombisile ukuthi banesibindi sokuncintisana nabagibeli abakhulu asebekhulile futhi abakwesabi ukwehluleka.
3. Wafundani uTadej Pogačar?
UmSlovenia wafunda isikole samabanga aphezulu esikoleni sobunjiniyela bomshini eLjubljana, inhloko-dolobha yaseSlovenia, lapho ahlanganisa khona izifundo zakhe nomsebenzi wakhe wokuba ngumsubathi. Ngemuva kokuwaqeda, wabhalisa e-Faculty of Sports Management eKranj, idolobha lesine ngobukhulu eSlovenia, lapho aqeqeshwa khona kwezemidlalo ngenkathi eqhubeka nomsebenzi wakhe wokuhamba ngebhayisikili.
4. Ngubani owaba nethonya lakho elikhulu kumabhayisikili?
UmSlovenia wayezungezwe kusukela esemncane ngamathonya amakhulu abesho ukuzinikezela ngokuphelele kumabhayisikili. Omunye wabo kwakungumfowabo omdala, uTilen Pogačar, owaqala esemncane ukwenza lokhu ekilabhini yamabhayisikili eRog eLjubljana, eSlovenia, futhi uTadej aphefumulelwa ukuthi aqale umsebenzi wakhe wokuhamba ngebhayisikili. Kodwa bekungekhona konke lokho okulula, uTadej wayemncane kakhulu ukuthi angaqeqesha emabhayisikili amakhulu kangaka, futhi iklabhu lalingenawo amabhayisikili amancane ahlelelwe isisindo nokuphakama kwakhe. Ngalesi sizathu, kuze kwaba yilapho eneminyaka engu-9 ubudala lapho iSlovenia iqala ukuziqeqesha ebusika futhi kancane kancane yabona umphumela womzamo wakhe nokuzinikela kwakhe. Omunye wemijaho yakhe yokuqala wawuseTrstenik, idolobha elincane emagqumeni aseKranj, lapho ayesekelwa khona yithimba lonke lamabhayisikili laseSlovenia.
5. Udlale ibhola ngaphambi kokuzicwilisa ngebhayisikili.
Ngempela. Yize ebeke umbono wakhe emhlabeni wokuhamba ngebhayisikili kusukela emncane kakhulu ngenxa yethonya lomfowabo omdala, umSlovenia wayeziqeqesha ebholeni esikoleni samabanga aphansi ayefunda kuso futhi waqala ukudlalela iqembu lasendaweni yangakubo: iKomenda. Iqembu lebhola. Yize eyisiyalo ayesithanda futhi asithanda kakhulu, ukuhamba ngebhayisikili kwaqala ukudlula yonke eminye imidlalo futhi wagxila kuyo ngokushesha ukuze aqhubeke nomsebenzi wakhe kulo mkhakha.
6. IVuelta a España yango-2019 kwaba ukwenyuka kwakhe kokuqala ukuya emsamo
Kwakungo-2019 lapho iSlovenia iqala ukubonakala neqembu lakhe eTour of Spain. Wayengomunye wabahlanganyeli abancane kunabo bonke emncintiswaneni futhi ukuhlukaniswa kwakhe akuzange kushiye muntu engenandaba. Unqobe izigaba ezimbili ngesonto lesibili kwathi kwesesithathu wahlonishwa ngemuva kokuwina eSierra de Gredos. Kwakukulo mncintiswano lapho egqoka ijezi elimhlophe, waba umgibeli wamabhayisikili omncane kunabo bonke ukunqoba isivivinyo futhi waba ngowesithathu esigabeni esijwayelekile, wenza indawo emsamo okokuqala ngqa.
7. Ibinjani iTour de France yakho yokuqala?
UmSlovenia uqhamuke nenhloso enkulu yokusiza umholi wakhe wezikhundla, uFabio Aru, umgibeli wamabhayisikili wase-Italiya owanqoba iTour ka-2015 futhi wenza buthaka ekuqaleni kweTour. Emasontweni okuqala omncintiswano, uTadej waba ngumholi weqembu esenqobe izigaba ezimbili zezintaba; owesishiyagalolunye, umgomo wakhe wawuseLaruns, kwathi oweshumi nanhlanu, ngomgomo waseGrand Colombier. Ngesikhathi iTour iqhubekela phambili iSlovenia ibibonakala igcwala amandla futhi izuze ukunqoba okungalibaleki esivivinyweni sesikhathi seLe Planche des Belles Filles, yazithwesa umqhele womjaho ngenzuzo eningi kunabaphikisi bayo. Ngale ndlela, ngaphezu kwejezi eliphuzi, owaseSlovenia uphinde wawina ijezi elimhlophe nejezi lamachashazi abomvu eneminyaka engu-22 nje kuphela.
8. Ukukhathazeka kwakhe ngebhayisikili kungokoqobo
Yize izeluleko zabaqeqeshi bakhe nomndeni wakhe, umSlovenia owaqala ukuzivocavoca lo mdlalo eneminyaka engu-9 edolobheni langakubo, uvumile ezingxoxweni eziningana ngobunzima anabo ukwehla ebhayisikilini lakhe, futhi ubengeke akwazi ukudlula ngisho okukodwa usuku nje ngaphandle kokuzinikela ngesikhathi kulokho akuthanda kakhulu: ukuhamba ngebhayisikili. Kusukela esemncane kakhulu, wachitha amahora namahora ethe njo kuthelevishini ebuka impumelelo yabagibeli bamabhayisikili abanjengo-Alberto Contador noma u-Andy Schleck abese elingisa ukunyakaza kwabo ahambe nebhayisikili uqobo.
Ngenhlanhla, wabelana nabangane abaningi abavela emhlabeni wokuhamba ngebhayisikili, kubandakanya iSlovenia Urška Žigart, umgibeli wamabhayisikili wokugijima weBikeExchange, kanye nomuntu wakubo uPrimož Roglič, aseke wabhekana naye kaningana eTour naseVuelta a España. Ngabo bobabili, ukwazile ukuzizwa evikelekile futhi ethandwa ngaphandle kokuthi ehle kubhayisikili umzuzwana.
9. Umqondisi we-UAE Team Emirates uchaze isitayela sakhe njengesimnandi ngemuva kwe-2021 Tour de France
U-Allan Peiper, umqondisi wezemidlalo weqembu uTadej asayine kulo ngo-2018, uchaze isitayela sakhe njengobumnandi nokuncintisana. Omunye wemigomo eyisisekelo yeSlovenia, ngaphezu kokuwina, ukuzijabulisa ngenkathi uncintisana. Isitayela somshayeli esingenakuhlulwa simholele ekutheni anqobe iTour de France okwesibili kulandelana ngemuva kokunqoba izigaba ezintathu nejezi eliphuzi, kodwa okubaluleke kakhulu, wavuma ukuthi wayezijabulisa njengengane kuyo yonke imincintiswano.
10. Ayithandi imincintiswano engayodwana
Izikhathi eziningana, umSlovenia uvumile ukuthi akayena umlandeli omkhulu wemiklomelo yomuntu ngamunye ngenxa yokushoda kobudlelwano obukhona kuzo. Njengasebholeni, isiyalo asenza ngaphambi kokuhamba ngebhayisikili, imiklomelo eminingi iyodwa, futhi lokhu yinto umgibeli webhayisikili angayiqondi noma ahlanganyele ngayo ngenxa yokuthi iyimidlalo yamaqembu. Kuyena, bekungeke kwenzeke ukuthi anqobe iTour de France ngaphandle kokuxhaswa ngabaphikisi bakhe, futhi ngaphezu kwakho konke, ukhombise inhlonipho nokubabaza bonke ngaphandle kohlobo lokuncintisana. Empeleni, ku-Tour ka-2021 uthe bekungaba kuhle uma ozakwabo bebengena emsamo babungaze indawo yokuqala naye.
Ubungazazi lezi zinto eziyi-11 nge-Aymar Navarro edumile!
U-Aymar Navarro uyiphayona le-freeride kazwelonke efuna ukuhlala "ebusika obungunaphakade". I-Val d'Aran skier (nomcimi-mlilo) kwaba owaseSpain wokuqala ukungena eFreeride World Tour, lapho
Lawa amavidiyo ahamba phambili ka-Aymar Navarro!
U-Aymar Navarro ungomunye wabasebenza ngokukhululeka abakhulu kunabo bonke abasebenza ngokukhululekile emhlabeni futhi ungumuntu ohamba phambili ongcono kunabo bonke esinabo eSpain. Wazalelwa esigodini sase-Aran, impilo yakhe izinikele ekufuneni "ubusika baphakade". Le catal
UMikaela Shiffrin Curiosities namavidiyo akhe amahle kakhulu e-YouTube!
Indlovukazi entsha yesekisi elimhlophe. Yile ndlela uMikaela Shiffrin aziwa ngayo emhlabeni we-alpine skiing emhlabeni jikelele. Isikebhe saseMelika uMikaela Shiffrin ukwazile ukushaya wonke amarekhodi
UMikaela Shiffrin Indlovukazi entsha yesekisi elimhlophe!
Uma sizokhuluma ngabesifazane ekushushuluzaneni ngeke siyeke ukukhuluma nge-American Mikaela Shiffrin, onqobe izindondo ezimbili zegolide kuma-Olimpiki, ama-World Championship amathathu, ama-Gene amathathu
U-Aymar Navarro Isikhulu esihamba phambili kunazo zonke eSpain!
Uyazi ukuthi ngubani u-Aymar Navarro? Abanye bathi uyena ohamba ngokukhululeka kakhulu eSpain, abanye bathi ngokungangabazeki uyisicucu, ucabangani wena? Wazalelwa futhi wakhulela esigodini sase-Aran futhi waba yikho konke u
Abashushuluzi besifazane aba-5 abenze umlando weqhwa
Esihlokweni sanamuhla sithathe isinqumo sokuyinikezela kwabashushuluzi besifazane aba-5 abaqophe umlando balazi iqhwa. Abesifazane esifanele ukubancoma ngemidlalo yabo nangempumelelo yabo, ngubani
U-Omar Di Felice: Ibhayisikili nekhamera yevidiyo ukufika enkambini ese-Everest.